बालुवाटारमा दुई पक्षबीच चर्काचर्की : समस्याको जड नै प्रधानमन्त्री ओली – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
बालुवाटारमा दुई पक्षबीच चर्काचर्की : समस्याको जड नै प्रधानमन्त्री ओली
उपाध्यक्ष, बामदेव गौतम
२२ कात्तिक, काठमाण्डौ। आज शनिबार बालुवाटारमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित सचिवालय सदस्य ५ जना र प्रधानमन्त्री एवम् अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच चर्काचकी भएको छ ।
धुम्बाराहीमा भेला भएर प्रचण्डसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बालुवाटार पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई गुटबन्दी गरेको आरोप लगाएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो ।
’तपाईं कार्यकारी अध्यक्ष भन्नुहुन्छ । दुई अध्यक्ष बसेको ठाउँमा हुँदै नभएका कुरालाई भए भनेर ल्याउनुहुन्छ तपाईंको यो के तरिका हो ? यो फाटोबादी विभाजनकारी तरिकाले कसरी हुन्छ ? भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो,’प्रधानमन्त्रीको जवाफमा प्रचण्डले तपाईंले मसँग पार्टी फुटाउँछु भनेर भन्नुभएको हो । तपाईंले स्थायी कमिटीको निर्णय पनि मान्नुभएन । एकलौटी ढंगले चल्न खोज्नुभयो भनेर भन्नुभयो ।’
यद्यपि बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफू नै कार्यकारी अध्यक्ष भएको बताएका थिए ।
’म पनि कार्यकारी हो भनेर भनेकै हो । अहिले पनि मै नै कार्यकारी हो ।’
बालुवाटार आएका सचिवालय सदस्यले बैठक माग गर्ने तरिका गलत भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए ।
’यो गुटबन्दी गर्न आवश्यक छैन । तपाईंहरूले गलत गर्नुभयो । दिनदिनै गुटबन्दी गर्दै आउनुभएको छ । पार्टी कमिटी भनेकै बैठक बस्न र निर्णय गर्नका लागि हो । यो त बुझेकै कुरा हो,’प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भन्यो,’यसरी बैठक माग्ने कुनै वैधानिक व्यवस्था पनि छैन । यो के गर्नुभएको हो ? अपराधिक योजना अन्तरगका काल्पनिक कुराहरू यसमा लेख्नु भएको छ । तथ्यहीन झूट र बकवास छ । बैठक सल्लाह अनुसार आवश्यकताका आधारमा बस्छ ।’
लिखित पत्रमा प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय सदस्यलाई ‘सडक छाप’ भनेको, स्थायी कमिटी सदस्यलाई ‘हुल्लडबाज’ भनेर आरोप लगाइएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो ।
’२ पेज लामो अनुरोध पत्र छ । त्यसमा भएको भाषा भड्काउने खालको छ । कसरी विरोधी बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रपञ्च छ । तथ्यभन्दा पनि काल्पनिक भएर लेखिएको छ,’प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो,’कोही व्यक्तिलाई प्रवृत्तिका आधारमा सडक छाप र हुल्लडबाज भनिएको भए पनि यसलाई आधार बनाएर लिखित डकुमेन्टमा सबैलाई भनिएको भनेर लेख्नु गलत हो ।’
कोभिड१९ मा सरकारले गरेका कामहरूको समिक्षा, पार्टी निर्णयको कार्यान्वयन लगायतका विषयहरूमा छलफल गर्न बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरेर लेखिएको पत्रमा पाँचै जनाको हस्ताक्षर छ ।
बालुवाटार पुगेका सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओली व्यक्तिवादी भएको आरोप लगाएका थिए ।
उनीहरूले पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै पार्टीको बैठकभन्दा माथि कोही नहुने बताएका थिए ।
बैठकमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीमा आलोचनात्मक चेत नभएको आरोप लगाएको स्रोतले बतायो ।
’तपाईंमा आलोचनात्मक चेत भएन । कमरेड जस्तो व्यवहार कसैसँग पनि गर्नुहुँदो रैनछ । आफैंले भनेको मान्नेलाई मात्रै राम्रो मान्नुहुँदो रैछ,’श्रेष्ठको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो,’अन्ध समर्थकको खोजी गर्ने कि आलोचनात्मक समर्थन गर्ने मान्छे खोज्ने भन्ने हो ।’
प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रवक्ताको दायरा मिचेको प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाएका थिए भने जवाफमा श्रेष्ठले आफूले पार्टीको निर्णय भन्दा बाहिर नबोलेको र बोलेको विषयमा व्यक्तिगत धारणा भनेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सबभन्दा बढी आक्रोसित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बनेका थिए ।
उपाध्यक्ष गौतमले समस्याको जड नै प्रधानमन्त्री ओली रहेको बताए ।
’कमिटीका निर्णय नमान्ने र सामूहिकतामा विश्वास नगर्ने व्यक्ति कम्युनिष्ट हुन सक्दैन । तपाईंमा एकपछि अर्को समस्या देखिएको छ,’गौतमको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो,’तपाईंमा व्यक्तिवादी चिन्तन हावी भइरहेको छ । म अब तपाईंसँग छैन ।’
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बैठकको निष्कर्ष सबैले मान्नुपर्ने बताएका थिए ।
वरिष्ठ नेता माधव नेपालले बैठक राखेर खुलमखुला छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।